2018 ~ Thinksphere
5:18 AM Political Commetaries No comments
5:16 AM Political Commetaries No comments
शिक्षक–विद्यार्थी सम्बन्धलाई निरस व्यापारिक लेनदेनमा रुपान्तरण गर्नु पत्रु चीजबीज बेच्ने पसलको दलालीका लागि ठीकै होला, शिक्षाको मूल्य भने जोगिदैंन – शिव विश्वनाथन, भारतीय समाजशास्त्री ।
अर्काले बनाएको बाटो छिचोल्न तयार हुने वा आँफैले नयाँ बाटो पहिल्याउने ? मौजुद संसारमा मिसिएर यथास्थितिको पहरेदारी गर्ने वा आँफै परिवर्तनको अभियन्ता बन्ने ? यी प्रश्नहरु सतहमा सामान्य देखिन्छन् । धेरै मन्थन नगरी यसै भन्दिन सकिन्छ, ‘नयाँ बाटो पहिल्याउने ।’ वा फिस्स हाँस्दै कोही जवाफी बन्न सक्छ, ‘अरुले गरेकै काम त किन दोहो¥याउने ? जीवनलाई नयाँ आयाम दिने !’ भन्न जति सजिलो छ, प्रमाणित गर्न त्यो भन्दा दोब्बर हम्मे ।
यी प्रश्नहरु हाम्रो विश्व दृष्टिकोण एवं सो अनुसार हाम्रो बचाईसँग सम्बन्धित छन् । यी प्रश्नमा गहिरो चिन्तन गर्नेले हाम्रो हुर्काई साथै हामीले आर्जन गरेको शिक्षाबारे सोच्नु पर्नेछ । आँफू बाँचेको समाज, सो समाजको आर्थिक एवं साँस्कृतिक संरचना लगायत प्रश्नका ठूलो लहरो सँगै तानिएर अघिल्तिर आउनेछन् । सहजै जवाफ दिइएका प्रश्नहरु अन्ततः प्रश्नकै भूमरी सृजना गर्ने औजार बन्नेछन् ।
हामी कसरी हुर्कियौं वा अहिले हाम्रा बालबालिका कसरी हुर्किँदैछन् भन्ने प्रश्नबारे अरु कुनै मौकामा छलफल गरौंला । अहिले भने हाम्रो औपचारिक शिक्षा सम्बन्धी छलफलका लागि केही अवधारणागत प्रश्न उठाउन मनासिव होला ।
मेरो ठम्याइमा हाम्रो औपचारिक शिक्षाले लिएको सबैभन्दा ठूलो उद्देश्य नै मौजुद संसारको सामना गर्ने सामथ्र्य भएका मानिसको निर्माण हो । पहिल्यै कसैले खनिदिएका बाटामा दह्रोसँग उभिएर पाइला चाल्न सक्ने बनाउनुलाई शिक्षाको ठूलो सफलता मानिन्छ । कारण, हाम्रो शिक्षा उत्तरको ठेली हो, प्रश्न उब्जाउने ब्याड होइन । सतहमा नदेखिएका वा पत्ता नलागेका समस्याको पहिचान गर्ने शिल्प होइन, अरुले नै औँल्याएको समस्या र समाधानका भारी बोक्ने भरिया हो । शन्देह होइन, आस्थाको खेती गर्नु शिक्षाको उच्चतम सफलता मानिन्छ । यथास्थिति माथि आस्था, स्थापित शक्ति–संरचना माथि आस्था । चाहे ति जतिसुकै समस्याग्रस्त किन नहुन् स्थापित सत्यलाई बलियो बनाउने अनुसारक (कन्फर्मिष्ट) हरु निर्माण गर्छ हाम्रो शिक्षाले । केही अपवाद भने अवश्य होलान् ।
5:09 AM Political Commetaries No comments
उज्जवल प्रसाई /
काठमाडौँ — दार्जिलिंगे साहित्यकार रामलाल अधिकारीले झापाको बाहुनडाँगीमा आयोजित साहित्यिक कार्यक्रममा भने, ‘हामीलाई पारिका लेखक नभन्नु  । हिउँदमा स्याप्पै सुकिजाने मेची खोलोले हामीलाई कसरी छुट्याउन सक्छ ? हामी सबै नेपाली लेखक हौं  ।
अधिकारी रहेनन्, मेची खोलो छँदैछ । बगरमा धमिला सीमास्तम्भ उभिएकै छन् । ती स्तम्भहरू बेलाकुबेला हाम्रा राजनीतिक विवादका अप्ठ्यारा विम्ब बनिरहेकै छन् । सिमानावारिको कञ्चनजंघा एफएममा दार्जिलिङ लक्षित कार्यक्रमको नाम ‘सिमानापारि’ छँदैछ ।
राजनीतिक सिमानाले ठूलो अर्थ राख्छ । सुदूर भविष्यमा सबै सिमाना नामेट भए अर्कै कुरा, नत्र सिमानाले मान्छेका पहिचान निर्माण गर्छन्, आपसी सम्बन्ध परिभाषित गर्छन् । सिमाना राजनीतिक हो र त्यो कृत्रिम हो । त्यसको प्रभाव भने यति गहिरो छ कि हामीलाई त्यो कुनै स्वयम्भू संरचना प्रतित हुन्छ । सिमाना बेगरको दुनियाँको परिकल्पना बरु दुरुह र अप्राकृतिक भान हुन्छ ।
साहित्यिक माहोलले निबन्धकार अधिकारीलाई भावुक बनायो । कम्तीमा नेपाली साहित्यमा कृत्रिम सिमानाको उपादेयता धेरै नखोजौं भन्न चाहे । कल्पना सुखद थियो, यथार्थका आफ्नै दु:ख छन् ।
5:03 AM Political Commetaries No comments
काठमाडौँ — अमेरिकी मानवशास्त्री क्लिफोर्ड गिर्जले उन्नाइसौं शताब्दीको बाली राज्यलाई ‘थिएटर स्टेट’ अर्थात् तमासे राज्य भने । उस्तै चरित्र भएका अरू राज्यबारे अध्ययन गर्नसमेत सो अवधारणा काम लाग्ने गिर्जको दाबी थियो । त्यस्ता राज्य जसले शक्ति अभ्यासको आधार ठोस भौतिक परिस्थितिलाई नभई सांस्कृतिक तामझाम एवं कर्मकाण्डलाई बनाउँछ ।
समाजको चुस्त व्यवस्थापन गर्दैन, बरु बहुविध तमासा रचेर बहुसंख्यक प्रजा भुल्याउँदै उनीहरूमाथि शासन गर्छ ।
अनेक राजनीतिक उथल–पुथलपश्चात् नेपाल अहिले गिर्ज–अवधारणाभन्दा केही फरक तर तमासे राज्यमा रूपान्तरित भएको छ । पछिल्ला दस वर्षमा रचिएका सयौं राजनीतिक तमासाबारे थुप्रै ठेली लेख्न सकिँदो हो । पहिलो संविधानसभा फजुल तमासामा पतित भएको दु:ख दोहोर्‍याउन जरुरी छैन । दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न अपनाइएको अदूरदर्शी प्रक्रिया अर्को तमासा थियो । सो तमासाले निम्त्याउने हजार दु:खका भोक्ता हुन अझै कति वर्षसम्म अभिशप्त हुनुपर्ने हो, ठेगान छैन । यो स्तम्भमा हालसालै रचिएका केही तमासामार्फत वर्तमान राज्यसत्ताको चरित्र बुझ्न खोजिनेछ ।
2:54 AM Poetry No comments
नीकोटीनले पहेँलीएका ती औँलाहरु
कसका हुन ?
नशाले झुमेर सन्नीपात बरबराईरहने
ती को हुन ?
कसको आयोजना हो यो धुमधामको ?
कसको मदिरालय हो यो बेहिसाबको ?
‘पीडा मेँ आनन्द जिसे हो,
आए मेरी मधुशाला ।’*
कविको गीत यस्तो थियो,
प्यारोडी बनाउने त्यो को हो,
‘दुस्रों की पीडा मेँ आनन्द जिसे हो,
आए मेरी मधुशाला ।’
बाक्लो धुवाँ र प्यारोडी गीतमा मुग्ध
एकथरी कुर्सीमा ढसमस्स झुम्दैछन्
अर्काथरी भुईँमा लडेर एकोहोरो बर्बराउँदैछन् ।
कुर्सीमा बसेर तीनले जपीरहेको इष्टदेवताको अनुहार
के जोसेफ स्टालिनसंग मील्दोजुल्दो छ ?
भुईँमा लडेकाहरु तन्द्रामा कोसँग बात मार्दैछन्,
के त्यो महेन्द्र शाह नै हो ?
के यो डढेको सुर्ती र रक्सीकै गन्ध हो ?
यो धुमधामको मधुशालामा
एक दर्जन रकमीहरु,
हजारौंका सपना डढाएर बेहिसाब फुक्दैछन्
लाखौंका संवेदना नीचोरेर एकोहोरो पसिना र आँसु पीउँदैछन् ।
तर, यो दुनियाँ पत्तो नपाएको ढोंग गर्छ,
म यो के लेखिरहेछु,
कल्पना वा तथ्य ?
कविता वा ईतिहास ?
8:43 PM Political Commetaries No comments
उज्ज्वल प्रसाई / सन् २००७ को घटना हो । तिनताक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी) अर्थात सीपीआईएम पश्चिम बंगालको शासक पार्टी थियो । पार्टी सञ्चालन एवं राजनीतिक चीन्तनमा ऊ स्टालिनवादी थियो । नवउदारवाद उसको आर्थिक नीति थियो ।
‘विकास’का लागि उसले इन्डोनेसियाली कम्पनी सलिम ग्रुपलाई चौध सय एकड जमिन दिने सम्झौता गर्‍यो । स्पेसल इकोनोमिक जोन (एसईजेड) बनाएर सो जमिनमा सलिम ग्रुपलाई व्यापार गर्ने बन्दोबस्त मिलाउन मेदिनीपुर जिल्लाको नन्दीग्राम ब्लक उसको छनोटमा पर्‍यो ।
गरिब मुसलमान किसानको बाहुल्य भएको नन्दीग्राममा सलिम ग्रुप केमिकल हब निर्माण गर्न चाहन्थ्यो । त्यसका लागि ठूलो संख्यामा नन्दीग्रामबासीलाई विस्थापित गर्नुपर्ने भयो । किसानको भूमि कर्पोरेटको जिम्मा लगाउने तत्कालीन राज्य सरकारको एकलौटी निर्णय थियो । सो निर्णयमा पुग्नुअघि नन्दीग्रामबासीसँग कुनै परामर्श गरेन । भूमिमा आधारित भएर जीवन निर्वाह गरिरहेकाबाट सम्मति लिएन । किसान र मजदुरको पार्टी भएको दाबी गर्ने सीपीआईएम नेतृत्वले आफ्नो निर्णय स्वत: किसानको निर्णय हुने निक्र्योल गर्‍यो ।
बंगाल सरकारले कर्पोरेटसँग गरेको साँठगाँठबारे सूचना फैलिएपछि नन्दीग्रामका किसान भूमि बचाउन आन्दोलित भए । ‘भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमिटी’ गठन गरे । सो कमिटीमा नक्सलवादी नेता–कार्यकर्ताको सहभागिता थियो भने कतिपय सक्रिय आन्दोलनकारी तृणमूल कांग्रेस निकट थिए । आन्दोलनलाई स्वतन्त्र वामपन्थी बुद्धिजीवी, लेखक तथा अभियन्ताले समर्थन गरे ।
2:42 AM Essays No comments
भीएस नयपाल कुशल लेखक हो– धेरैले सन्देह गर्दैनन् । ऊ असल मानिस हो– कोही पनि खुलेर यसो भन्दैनन् । कुशल लेखक र असल मानिसको दोसाँधमा कुनै जमिन हुन्छ भने नयपाल लामो समयसम्म त्यहीँ उभिए । लेखकका रुपमा प्रशंसा चुलिँदा उनका राजनीतिक विचारको आलोचना सुरु भइसकेको थियो । मृत्युपछि उनका लागि छुट् याइएको विमर्शको धरातल पनि उही प्रशंसा र आलोचनाको मझधार नै भयो ।
लेखकका रुपमा नयपालको बिदाइमा सबैले अ हाउस फर मिस्टर विश्वास सम्झिए । सरल वाक्य, घटनाको सचित्र वर्णन गर्ने शब्द–सामथ्र्य, समयलाई अक्षरमालामा खिप्ने खुबी एवं दु:खलाई व्यंग्य र हाँस्यरसमा व्यक्त गर्ने शिल्पको स्मरण गरे । त्यसमा उनले आफ्नै पिता सीप्रसाद नयपालको कथा लेखेका छन् । क्यारेबियन टापुमा बसेको भारतेली समाजमा बेलायती उपनिवेशका नंग्राले कोपरेर बनाएका सांस्कृतिक घाउका पाप्रा उप्काउादासमेत पाठक हाँसिरहे । सम्भवत: लेखनको यही विशिष्ट पहिचानका लागि नयपाल सधैँ प्रशंसित रहे ।
2:39 AM Essays No comments
उज्ज्वल प्रसाई / २६ साउन २०७५ १२:२२:०० /
काँकरभिट्टामा अनौठो घटना भयो। बजारबीचको ठूलो भवनको माथिल्लो तलामा पुस्तकालय खुल्यो। पुस्तकालय भन्न सुहाउँदो फराकिलो कोठा थियो। कुनै दाताले दिएका अंग्रेजी किताबको डंगुर थियो। त्यहाँ सेक्सपियर र मार्क्स नभेटिएर के भो, किताबहरू थिए। साझा र प्रज्ञाप्रतिष्ठानले छापेका नेपाली साहित्यका कृतिहरूको संकलन थियो। दैनिक पत्रिका, गरिमा र समकालीन साहित्यका नयाँपुराना अंक थिए। तिनताक नाम कमाएको सहकारीको अगुवाइमा सो पुस्तकालय खुल्नु अनौठो घटना थियो।
दुई स्थानीय साहित्यकार, एक रैथाने नेता र निजी विद्यालयका दुई शिक्षक पुस्तकालयका नियमित पाठक थिए। सुरुमा त्यहाँ नियमित जाने विद्यार्थी सम्भवतः म एक्लो थिएँ। पुस्तकालयको हाजिरी रेकर्डमा सधैं यिनै आधा दर्जन मान्छेको नाम हुन्थ्यो। झुक्किएर वा एक झल्को हेर्ने रहरले पुग्नेहरू फर्केर जाँदैनथे। बजारका पसले फुर्सदमा बरु लुँडो खेल्थे, पुस्तकालय उक्लने जाँगर कहाँ ?
पुस्तकालयमा एकजना कर्मचारी थिए। नियमित आउने छजना मध्ये सधैं सबै जाँदैनथे। त्यसैले पुस्तकालय धेरैजसो रित्तो रहन्थ्यो। दिनभरि एक्लै धुमधुम्ती बस्नु परेकाले होला, पुस्तकालयमा मान्छे देख्दा उनी उज्याला हुन्थे। हम्मेसी बोल्न नपाएका उनले कोही गफिन लायक मान्छे भेटे भने घन्टौं छोड्दैनथे।
2:36 AM Essays No comments
उज्ज्वल प्रसाई / १५ साउन २०७५ ०७:३८:०० /
अन्नपूर्ण पोस्ट्मा छापिएको समाचारअनुसार नेपालका विश्वविद्यालयमा मानविकी संकाय संकटग्रस्त छ। सो संकायअन्तर्गतका केही विषयमा अति न्यून विद्यार्थी भर्ना हुन्छन् भने केही विषयका विभाग बन्द हुने तरखरमा छन्। यो खबर प्रकाशित भएको केही समयपछि, राजधानीका पुस्तकालयहरू बेहाल अवस्थामा रहेको समाचार पनि अन्नपूर्णले नै छाप्यो। पुस्तकालय जानुको उद्देश्य बदलिएको विषय सो समाचारमा उल्लेख थियो। पहिले बौद्धिक उन्नयनका लागि प्रयोग गरिने पुस्तकालय आजकल जागिरे परीक्षा पास गर्न बढी प्रयोग हुन थालेछन्। खबर सुखद् होइनन्, यी विषय समाचार–लायक देखिनु भने उचित हो।
चरम दलीयकरण नेपालका विश्वविद्यालयको मुख्य समस्या हो भनिन्छ। विश्वविद्यालयले आफ्नो गरिमा गुमाएकोमा चिन्ता गर्न थालिएको पनि धेरै भयो। विश्वविद्यालयको नेतृत्व गर्नेहरू पदीय जिम्मेवारीबाट विचलित भएकाले समस्या बढ्दै गएको बुझाइ व्याप्त छ। प्राज्ञिक अनुसन्धान र ज्ञानको उद्यम गर्ने थलो नभएर विश्वविद्यालय प्रमाणपत्र वितरक संस्था जस्तो बनेको आरोप लगाउने पनि उल्लेख्य छन्। प्राज्ञिक कर्मले सार्वजनिक पहिचान बनाएकाहरू आफू काम गर्ने विश्वविद्यालयको हालत कमजोर भएको आफैं स्वीकार्छन्। त्यसो त समस्याको अतिरञ्जना गर्दै ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मृत्युवरण गरिसकेको’ घोषणा गर्नेहरू पनि नभएका होइनन्।
डा. गोविन्द केसीको अनशनको सिलसिलाले पनि त्रिविजस्ता संस्थाका कमजोरी सतहमा ल्याएका हुन्। उनको अनवरत संघर्षको परिणामस्वरूप जस्ता सम्झौता भएका छन्, तिनको सफल कार्यान्वयन भएमा स्वास्थ्यशिक्षाको गुणस्तर र सहज उपलब्धतामा फरक पर्नेछ। तथापि माथि उद्धृत खबरअनुसार शिक्षाका उदात्त उद्देश्य प्राप्त गर्न, सोअनुरूपका संस्था र संस्कारको निर्माण गर्न भने अझै कठिन देखिन्छ।
2:34 AM Political Commetaries No comments
उज्ज्वल प्रसाई / ०१ साउन २०७५ ०८:१२:०० /
राजनीति गर्नेहरू वाचाल हुन्छन्, वाक्पटुता पनि नेतामा हुनुपर्ने गुण मानिन्छ। आफ्नो बोलीबाट आम मानिसलाई प्रभाव पारेर चाहेको सफलता हात पार्ने असंख्य नेता छन्। जरुरी विषयबाट आममानिसको ध्यान मोड्न वा आफ्ना अक्षमता र कमजोरी छोप्न पनि उनीहरूले वाक्पटुता प्रयोग गर्छन्। बजारले पुराना माल बेच्न ओढाउने गरेका नयाँ चमकदार खोल जस्ता नयाँ भाष्य सिर्जना गर्न पनि राजनीतिक मानिसहरू खप्पिस हुन्छन्। नेपालका वर्तमान सत्ताधारी नेताहरू पनि यस्ता उद्यममा अब्बल छन्। विकास र समृद्धिको प्रभावकारी भाष्य त उनीहरूले बनाएकै छन्, हरेक गम्भीर प्रश्नलाई दबाउन वा तिनलाई ओझेल पार्न उनीहरू सफल हुँदै आएका छन्।
2:30 AM Political Commetaries No comments
उज्ज्वल प्रसाई / १९ असार २०७५ ०८:३७:०० /
केही अप्ठ्यारा प्रश्नको सामना गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो ज्ञानको अथाह उचाइबारे नै नयाँ धारणा बनाउन सहज हुन्छ कि ?
प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली कुशल वक्ता हुन्। उनको भाषण सुन्न अभ्यस्तहरू भन्छन्-एक घन्टाभन्दा बढी समय एकोहोरो बोल्दासमेत उनका स्रोताले थकान महसुस गर्दैनन्। त्यसैले उनको भाषणको पर्खाइमा बस्नेहरूको संख्या अधिक हुन्छ। उनका बोलीमा विश्वास गर्नेहरूको पक्कै कमी छैन। उनको अध्ययनप्रतिको रुचीबारे पनि चर्चा चल्ने गर्छ। मध्यरातसम्म नेपालका अखबारहरू पढ्ने र अनलाइन पोर्टलका सामाग्री पनि अक्सर नछुटाइ पढ्ने गरेको खबर सार्वजनिक भएको छ। सूचनासँग यति संगत नगरी मोहक भाषण गर्न सम्भव छैन।
केही दिनअघिको एक भाषणमा माक्र्सवादका आलोचकलाई उनले माक्र्सवादबारे केही नपढी आलोचना गरेको भने। तसर्थ, उनी आफूले माक्र्सवादबारे पुस्तकहरूको गहिरो अध्ययन गरेको हुनुपर्छ-उहिल्यैका लेनिनदेखि अहिलेका डेभिड हार्वेसम्म पढेको अनुमान गर्न सकिन्छ। सो अध्ययनकै कारण उनी आजपर्यन्त माक्र्सवाद सान्दर्भिक छ भन्नेमा ढुक्क देखिन्छन्। अध्ययनकै कारण उनले ‘पोलिटिकल कम्युनिज्म’ र ‘फिलोसोफिकल कम्युनिज्म’ बारे गम्भीर सिद्धान्त अघि सारेका छन्। त्यति मात्र होइन, उनीद्वारा प्रतिपादित सो सिद्धान्तका आधारमा अहिले आफूहरू पोलिटिकल कम्युनिस्ट भएको निचोड पनि निकालेका छन्।
2:27 AM Political Commetaries No comments
उज्ज्वल प्रसाई / ०५ असार २०७५ ०७:५६:०० /
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा शासक होइन, जनप्रतिनिधि हुन्छन्। तर व्यवहारवादी राजनीतिको फलामे धरातलमा बजारिएर त्यो आदर्श प्रायः घाइते हुन्छ। शक्ति अभ्यास गर्ने क्रममा जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिले शक्तिको मूल स्रोत आफैंलाई ठान्न थाल्छन्। अर्थात् जनतालाई विस्मृतिमा पन्छाएर, शक्तिको केन्द्र आफूलाई ठान्ने यत्न भइरहेको हुन्छ।
शक्ति सन्तुलनका लागि राज्यमा विभिन्न स्वायत्त संस्था स्थापना गरिएका हुन्छन्। नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम एवं आमवृत्त निर्माण गर्ने सचेत प्रयत्न भएका हुन्छन्। नागरिकको शिक्षित, स्वस्थ र सम्मानजनक जिन्दगी जिउने, सिर्जनात्मक काम गर्ने र जनसरोकारबारे सूचना पाउने अधिकार कुण्ठित गराउने प्रयत्न भए, त्यसलाई सच्याउन सचेत हस्तक्षेप आवश्यक हुन्छ। तर जब शक्ति सन्तुलन खल्बल्याएर जनप्रतिनिधि शासक बन्छन्, तिनले आफ्ना सहयोगीलाई दास बनाउन थाल्छन्, आलोचक स्वतः दुश्मन देखिन्छन्। केवल दास र दुश्मनले घेरिएका शासक स्वयं लोकतन्त्रका भक्षक हुन्छन्, ती फासिवादी हुन्छन्।
2:25 AM Political Commetaries No comments
उज्ज्वल प्रसाई / २२ जेठ २०७५ ०७:२०:०० /
मधेसकेन्द्रित राजनीति नेपाली राजनीतिको महत्वपूर्ण हिस्सा हो। उपेन्द्र यादव जटिल मधेसी राजनीतिका एक मुख्य पात्र हुन्। उनी ओली–सरकारको अंशियारी बन्न गएपछि सरकारका सबै जटिलता समाप्त भएको अनुमान गरिन्छ। मधेस राजनीतिको अर्को खेलाडी राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) पनि सरकारमा सामेल हुन आतुर रहेको खबर सार्वजनिक भएको छ। संविधान संशोधनका लागि समय अवधि तोकेको बहानामा सत्ताधारी बन्ने उसको लालसा पूरा हुनेछ। चुनौतीको यो झिनो त्यान्द्रो पनि सत्ताको पागमा भुलिएपछि सरकारका लागि गर्नुपर्ने एउटा मात्रै काम बाँकी रहन्छः ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ अभियान। प्रश्न यति हो, सबै चुनौतीको ‘को–अप्टेसन’ बाट शक्तिशाली बनेको सरकारले आफ्ना लागि आफैं तोकेका काम कति जनमुखी हुन् ? भनिएका सपना पूरा हुँदा आइपर्ने समस्या के हुन् ? पूरा नहुँदाको परिणाम के हो ?
9:45 AM Poetry2comments
सपिङ्ग सेन्टर भूमरी हो,
पस्न सजिलो, निस्कन अप्ठ्यारो ।
खाँटी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका
एक हुल कमरेडहरु
भूमरीको ‘सब्लाइम’ आनन्द लिन
पसे शहरमा भर्खरै खुलेको सपिङ्ग सेन्टर,
त्यसपछि उनीहरु फर्केर आएका छैनन् ।
भूमरीमा हराइरहेका कमरेडलाई खोज्न
केही महिनाअघि गोताखोरहरु ल्याइयो
उद्धार गर्न चाहिने औजार जुटाइयो
कार्ल माक्र्सको ‘कम्युनिष्ट मेनिफेष्टो’ र
माओको 'रेड बुक' ।
उपयुक्त औजारले सुसज्जित गोताखोरहरु
जसै पसे भूमरिमा,
उनीहरुको क्षमतामा विश्वस्त खाँटी कम्युनिष्टहरु
हराएका आफ्ना कमरेडहरु भेटिने आशामा
गाढा निद्रा सुते ।
गोडा दुइएक महिना बिते,
निदाएका खाँटीहरु आँग तान्दै उठे र नियाले वरपर,
फर्केका छैनन् कमरेडहरु
उतै हराए गोताखोरहरु पनि ।
वर्ग संघर्षको नयाँ मोडल––
भिराएर फेरि एकपटक खाँटीहरुले
खटाए गोताखोरको थप एउटा टोली,
र फेरि एकपटक सुते गाढा निद्रा ।
दिनहरु बिते, रातहरु सकिए,
फर्केनन्, कोही फर्केनन् ।
बिउँझिएपछि खाँटीहरुले आँफै गोताखोर बन्ने निर्णय गरे,
भिरे नयाँ पूराना सबै औजार
सुस्तरी खुट्टा चाल्दै पसे सपिङ्ग सेन्टर ।
जसै पसे भूमरीमा,
विचारको बोझले थिचिएको भारी खत्रक्क खस्यो,
चंगा भयो शरिर, हलुका भयो मन
‘भूमरी पनि यस्तो ?’ छक्क परे कमरेडहरु ।
हराएका आफ्ना स्वजनलाई भित्रै भेटेपछि
कसोकसो रमायो जम्मैथोक–
ओंठ, यौनांग, खुट्टा, र मस्तिष्क ।
ताता दिनका सम्झना हराए, चिसा रातका ऐंठन हराए
लामा सडक विस्मृतिमा पुगे, अप्ठ्यारा गोरेटाका कुनै डोब रहेनन्
भूमरीका आफ्नै नियम हुन्छन् ।
आफूसँगै ल्याएका औजारको
लाफिंग बुद्धकै मोल पाए,
तिनका थुप्रै प्रतिकृति बने, शोकेसमा सजिए ।
क्युरियो हँसिया हथौडा बेच्छन् र
ताजा ‘बेस्टसेलर’ उपन्यास पढ्छन् खाँटीहरु ।
‘पढ्नु मस्तिष्कमैथुन हो, छोटो र आनन्दमयी,’
एकदम सजिलो र हलुका लुगा लगाउन जरुरी छ,
चे ग्वेभारा गन्जी र जापाटिस्टा कट्टु ।
12:50 AM Political Commetaries No comments
उज्ज्वल प्रसाई / २५ बैशाख २०७५-
सामान्य मानिस अनेक भयहरूबाट आक्रान्त हुन्छ। प्राकृतिक रौद्रताको सामना गर्ने क्रममा मान्छेले विविध संस्कृतिको निर्माण गर्छ र सधैं निर्भयी हुने यत्न गरिरहन्छ। युद्ध र हिंसाका विभिषिका छिचोलेर पनि मान्छे सधैं भयमुक्त हुन खोजिरहेको हुन्छ। आधुनिक समाजमा मानव अधिकारलगायतका अवधारणा यसै सिलसिलामा सिर्जित भएका हुन्। वर्तमान नेपाली समाज र यहाँ निर्माण भएका संस्कृतिमा यहाँका मानिसले त्यस्ता अनेक भयहरूविरुद्ध गरेका संघर्ष र भोगेका जीवनका स्मृतिहरू छन्। ‘कल्चर्स अफ फियर’ बारे विशद् समाजशास्त्रीय र मानवशास्त्रीय विमर्श भएका छन्, नेपाली सन्दर्भमा पनि त्यसो गर्न सकिन्छ। अहिलेलाई हामीले वर्तमानमा भोगिरहेका अनेकन् भय र ती भयलाई सम्बोधन गर्न चुकेका हाम्रा सुरक्षा संयन्त्रबारे छोटो विमर्श गरौं।
व्यक्तिगत सुरक्षा चुनौतीपूर्ण हुने, समयमा र सहुलियतमा उपचार नपाएर दुःख पाइने, ठूलो दुःखले जोहो गरेको थोरै सम्पत्ति नासिने वा खोसिने, साना नानीहरूको उचित स्याहार गर्न नसकिने, प्रकोपहरूमा फस्ने र उद्धार नगरिने, अन्धविश्वासको सिकार भइने, धुर्तहरूबाट ठगिने, सडक र हवाई दुर्घटनामा परिने, शक्तिशाली तप्काले गर्ने प्रहारको सिकार भइने, नियतवस चलाइने बद्नामीका उद्यमबाट आक्रान्त भइने। भयका यस्ता असंख्य स्रोत छन्। खास वर्ग, जात, लिंग, भाषा, धर्म वा समुदायको सदस्य भएकाले नै भोग्नुपर्ने कहर बिर्सन मिल्दैन। सत्ता र शक्तिमा पहुँच नभएकाले भोग्नुपर्ने असंख्य हैरानीले पनि नागरिकका मनमा भयको सञ्चार गरिरहेको हुन्छ।